Government hails Chiyangwa's CAF appointment - Soccer24
Soccer24 on 11 May, 2017
The Zimbabwean government through the Ministry of Sport and Recreation has hailed the appointment of Dr. Philip Chiyangwa as vice president of the Confederation of African Football (CAF) Organizing Committee for Africa Cup of Nations (AFCON) games.
The government expressed its delight in Chiyangwa’s appointment and said the sky is the limit for the Zimbabwe Football Association (ZIFA) and Council of Southern African Football (COSAFA) president.
A statement released by the ministry read:
“The Ministry of Sport and Recreation is delighted to join the nation in congratulating Dr. Phillip Chiyangwa on his recent appointment as Vice-President for the Africa Cup of Nations Committee.
“This new soccer administration assignment conferred to Dr. Chiyangwa unequivocally illustrates Zimbabwe’s sport administration gravitas which continues to impact regional, continental and international spheres of influence. To this effect, the sky is the limit for Dr. Philip Chiyangwa and other sport administrators in Zimbabwe.
“In his ascendancy as CAF [committee’s] vice president, Dr. Philip Chiyangwa must be assured that he has the support of Zimbabwe’s sport constituency which in essence is an embodiment [of] Ministry of Sport and Recreation’s Sport Diplomacy Programme.
“This particular achievement by Dr. Chiyangwa also complements successes by other Zimbabwean sport administrators who have assumed influential administration assignments within regional, continental and global sport management bodies.”
To subscribe, first save this number in your contacts : 07333 87917
PreviousReal Madrid through to Champions League Finals
NextDynamos have a better away record this season, says Mutasa ahead of Highlanders clash